डिसेम्बरमा कटरिना र विक्कीको विवाह, यस्तो ठाउँमा हुदैछ ! - ramechhapkhabar.com
डिसेम्बरमा कटरिना र विक्कीको विवाह, यस्तो ठाउँमा हुदैछ !
मिडिया रिपोर्टका अनुसार विक्की र कटरिनाको इन्गेजमेन्ट निर्देशक कबीर खानको मुम्बई स्थित घरमा गोप्यरुपमा भएको थियो । यसमा विक्की र कटरिनाको परिवारका सदस्य मात्र सहभागी थिए । कटरिना र एक था टाइगरका निर्देशक कबीर निकै नजिक रहेको बताइन्छ । कटरिनाले उनलाई राखी पनि लगाउने गरेकी छन्